अल्ट्रासाउण्ड गर्दै हुनुहुन्छ? :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
अल्ट्रासाउण्ड गर्दै हुनुहुन्छ?
डा विकाश अधिकारी बुधबार, फागुन ७, २०७०, १७:११:००
अल्ट्रासाउण्ड स्क्यानिङलाई सानोग्राफी पनि भनिन्छ। यसको प्रयोग शरीरको भित्री भागको परीक्षणकालागि गरिन्छ। शरीरको भित्री भागको स्क्यानिङकालागि यसमा बिशेष प्रकारको ध्वनिको प्रयोग गरिएको हुन्छ, जसलाई मानिसले सुन्न सक्दैन। यसलाई भिडियो एक्सरे पनि भनिन्छ।
शरीरमा ध्वनि प्रवेश भएपछि केही तरंग स्क्यानिङ गर्नुपर्ने अंगमा ठोक्किएर फर्किएर आउँछ। फर्केर आउने ध्वनिलाई अल्ट्रासाउण्ड मेसीनद्वारा मापन गरिन्छ। यो ध्वनिले शरीरको अंगको विशेष भागलाई चित्रमा रुपान्तरित गर्छ। यही नै अल्ट्रासाउण्डको चित्र हो।
अल्ट्रासाउण्डले नरम र तरल पदार्थले भरिएको अंगको चित्र राम्रो बनाउछ। यो सुरक्षित र दुखाई नहुने परीक्षण हो। सामान्यतयाः अल्ट्रासको प्रयोग गर्भावस्थामा भ्रुणको जानकारी तथा मूल्याङ्कनकालागि गरिन्छ। यसका साथै यसको प्रयोग पित्त, पत्थरी, लिभर, मिर्गौला, मुत्रथैली, प्रोष्टेट, प्याङक्रियाज, ओभरीमा भएको कुनै पनि अंगमा गर्न सकिन्छ।
कतिपय अवस्थामा अल्ट्रासाउण्ड गर्दा खाना तथा पानीसमेत नखाई गर्नु पर्ने हुन्छ भने कुनैकुनैमा खाना खाएर पनि गर्न सकिन्छ। पानी मात्र खाएर अल्ट्रासाउण्ड गर्दा पिसाब थैली, प्याङक्रियाजको चित्र राम्रो देखिन्छ। तथा खाना नखाएर पित्तथैलीको अल्ट्रासाउण्ड गरिन्छ। अल्ट्रासाउण्ड पेटको मात्र नभई थाइराइड ग्रन्थी, नशा परीक्षण, स्कोडम, नेक, बच्चामा पनि गरिन्छ। अल्ट्रासाउण्ड भनेको एक्सरे होइन, यसमा रेडियसन हुँदैन। खाना खाएर गर्भावस्थामा अल्ट्रासाउण्ड गर्न सकिन्छ।
मेडिकल उपकरणबारे जान्नैपर्ने तथ्य आधुनिक चिकित्सा विज्ञानमा उपकरणको भूमिका विशेष रहेको छ। उपकरण बिनाको उपचार सम्भव नै छैन या कल्पनाभन्दा बाहिर हुन्छ। त्यसैले त देशमा खुलिरहेका धेरै निजी तथा सरकारी अस्पतालहरुमा उपकरण भित्र्याउने होड नै चल्ने गरेको छ। बुधबार, कात्तिक २६, २०७७
फैलँदो उपकरण बजार, बल्ल नियमनको तयारी नेपालमा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको विस्तारसँगै उपकरणको बजार पनि बढ्दै गइरहेको छ। केमसानको तथ्यांक अनुसार नेपालमा मेडिकल उपकरणको क्षेत्रमा वार्षिक १५ अर्बभन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको छ। बुधबार, कात्तिक १९, २०७७
कोभिड-१९ र क्यान्सरको रेडियोथेरापी उपचार शनिबार, वैशाख १३, २०७७